3 Way Individual Color Switch NKT-103
Narken NKT-1033Way Individual Colour Switch is designed for everyday use. It is suitable for all kinds of plugs used around the world. Surge protector and non flammable ABS plastic mould are provide..
5 Way Individual Color Switch NKE-105(3M)
Narken NKE-1055Way Individual Colour Switch is designed for everyday use. It is suitable for all kinds of plugs used around the world. Surge protector and non flammable ABS plastic mould are provide..
6 Way Individual Color Switch NKE-106(3M)
Narken NKE-1066Way Individual Colour Switch is designed for everyday use. It is suitable for all kinds of plugs used around the world. Surge protector and non flammable ABS plastic mould are provide..
Accessories Box (နားကပ်၊ လက်စွပ်၊ ကလစ်ထည့် Box) - A057
နားကပ်၊ လက်စွပ်၊ ကလစ်ထည့် BOX လေးကတော့ 11.5 cm & 11.5 cm ရှိပြီး ဒုတိယအကန့်နဲ့ နောက်ဆုံးအကန့်လေးကတော့ အတွင်းမှာ အကန့်လေးတွေ ခွဲထားပေးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီ BOX လေးက 360 အထိလှည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ လှေက..
American Flex Tape (ရေစိုခံတိတ်) - A075
FACEBOOK မှာ TIKTOK မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ ပေါက်နေသောဘူးတွေ၊ PVC တွေ၊ ရေပိုက်တွေ၊ အိမ်သာတွေ၊ ဇလုံတွေ၊ ထီးတွေ ရေမယိုထွက်နိုင်အောင် ကပ်ပြီးထိန်းပေးလို့ရတဲ့ FLEX TAPE တိတ်လေးပေါ့။ အလျား 1.52m၊ အနံ 10cm အလေး 1..
Animal shape door stopper (L) (JC 411)
About The Product This product is designed to help prevent children from risks. This products are high quality, fair price and useful. Suitable for use around the home...
Animal shape door stopper (S) (JC 413)
Anti lost (JC 6672) - Orange
About The Product Keep toddlers close, it gives toddlers independence but keeps them safe at the same time.Double tape for kids hand, not easy to take off from them. The wrist link is both simple to ..
Auto Light Bulb - A067
Auto မီးချောင်းလေးကဘာလည်းဆိုတော့ မီးအဖွင့်အပိတ်လုပ်စရာမလိုဘဲ အသံလေးကြားလိုက်တာနဲ့ Auto မီးအလင်းရောင်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောကို ဆိုလိုတာပါ။2နာရီအားသွင်းပေးရုံနဲ့ ရက် 90 လောက်ကြာရှည်သုံးနိုင်တယ်။..
Bear Night Lights - A111
ဒီကာတွန်း led မီးလေးကအကြည်ရောင်လေးဆိုတော့ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အရမ်းကိုလှပြီး စားချင်စိတ်တောင်ပေါ်လာတယ်မလား။ ဒီ led လေးရဲ့ မီးလေးက အဆင့်3ဆင့်ပြောင်းလို့ရတယ်။ ခလုတ်လေးတစ်ခုပါတော့ ခလုတ်လေးနဲ့မီးအလင်းရောင် ..
Cat Lamp - A028
ကြောင်လက်ရာလေးနဲ့ LED LAMP လေးပေါ့။ ကြောင်လေးရဲ့လက်ကလေးဆိုတော့ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး အူယားစရာကောင်းတာပေါ့။ ရည်းစားကို လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း အရမ်း CUTE တာပေါ့နော်။..
About BrandThe company was founded in year 2008.With the foresight of expanding, our first branch set up will be operated in JULY 2016, which located at the state, Seremban, Malaysia.We are specialist..